Maxay Soomaaliya Ka Baran Kartaa Wadaxaajoodka Daalibaan iyo Dowladda Afqanistan? – Xeernews24
Maxay Soomaaliya Ka Baran Kartaa Wadaxaajoodka Daalibaan iyo Dowladda Afqanistan?
13. September 2020 /in WARAR/NEWS /von admin
Kabul, September 12, 2020- (XeerNews24) Wadahadaladii rasmiga ahaa ee ugu horeeyya ee u dhaxeeya dowladda Afqanistaan iyo kooxda Taliban ayaa lagu wadaa in maanta ay ka bilaabmaan caasimada dalka Qadar ee Doxa. Madaxa ergada, Dr Abdullah Abdullah, ayaa qoraal uu soo dhigay barta tweetar-ka waxaa uu ku sheegay inay doonayaan “nabad waarta oo sharaf ku dhisan”.
Mareykanka ayaa door muhiim ah ka ciyaaray wadahadaladan oo qeyb ka ahaa heshiis laba geesood ah oo bishii February ay Taliban la saxiixdeen.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku tilaamay kulanka maanta lagu wado in uu dhaco “mid taariikhi ah “
Goormey soo ifbaxeen Taliban?
Dagaalyahanada Taliban ayaa soo ifbaxay horraantii sanaddii 1990,waxa ayna markii hore ka billawdeen waqooyiga Pakistan.
Waxa ay kooxdan soo ifbaxday ka dib markii uu dhamaaday dagaalkii midowga Soofiyeet ee dalkaAfqanistan.
Taliban waxaa xubnaha inta badan ka tirsan ay u badan yihiin qowmiyadda Pashtun oo ah qowmiyada ugu tirada badan Afqanistan.
Dalka Afqanistaan waxa ay kooxda Taliban yimaadeen sanaddii 1994.
Waxaa la rumaysan yahay in markii ugu horreysay oo ay howshooad bilaabayeen ay qarash ka heli jireen dalka Sacuudi Carabiya.
Markii ay Afqanistaan la wareegeen waxa ay kooxda Taliban dalkaasi ku soo rogeen Shareecada Islamka.
Intii ay xukumayeen dalka Afqanistaan waxay kooxda Taliban ay mamnuuceen dhagaysiga heesaha, shaneemooyinka iyo in gabdhaha ay da’doodu tahay 10 sano iyo ka badan ay iskuulada aadaan.
Dalalkii aqoonsanaa intii ay xukunka hayeen Talibaan waxaa ka mid ahaa Pakistan,Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Mareykanka waxa uu horey ugu aqonsanaa kooxda Taliban koox argagixiso, dagaal ayuuna kula jiray in ka badan 17 sano.
Balse waxaa muuqata in mareykanka iyo dowladda Afqanistaan imika ay isku dayayaan in qaab wadaxaajood ah uu u maro xal u helidda dhibaatada afqanistaan.
Soomaaliya waxaa dolwadda dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab oo marka la eego farsamooyiinka ay adeegsadaan dhanka dagaalka ay isaga mid yihiin kooxda Taliban.
Dadka lafagura arrimaha Soomaaliya ayaa waxaa ay farta ku fiiqayaan in ay haboon tahay in dowladda Soomaaliya ay wadahadalo la furto kooxda Al Shabab.
Dr Axmed Sheekh Maxamed (Axmed Tiir)oo u kuurgala arrimaha Soomaaliya ayaa rumaysan in madaxda Soomaalida looga baahan yahay inay wax ka bartaan wadahadallada Mareykanka iyo Taliban.
“Waxaanu ka baran karnaa in wadahadal aan ugu yeerno oo dowladda ku dhawaaqdo iyo dadka imika gacanta ku haya Soomaaliya ay diyaar u yihiin in ay la hadlaan Al-Shabaab, lana waydiiyo horta waxa ay rabaan, ” ayuu yiri Axmed Tiir.
Waxyaabaha loo baahan yahay si wadahadal loola furo Al-Shabaab ayaa waxaa ka mid ah in la helo dowlad saddexaad oo arrintaasi fududeyso,
“In la raadiyo dowlad saddexaad oo ay xafiis ka furan karaan, hadda Taliban waxa lagula hadlayaa Dooxa waayo marnaba kuma aaminayaan wadanka gudihiisa ” ayuu yidhi Dr Tiir.
Maxay ku kala duwan yihiin Taliban iyo Al-Shabab?
Sida uu rumaysan Dr Axmed Tiir kooxaha Talibaan iyo Al-Shabaab ayaa inkastoo ay ka siman yihiin weerarada ay dadka rayidka ku dhintaan ayaa haddana waxaa jira waxyaabo ay ku kala duwan yihiin.
“Inkastoo ay ka midaysan yihiin Taliban iyo xarakada Shabab dhanka is qarxinta haddana waxay ku kala duwan yihiin fahamka guud, dowladnimada iyo sida loo dabaqayo shariicada islamka ” .ayuu yidhi Dr Axmed Tiir.
Dr Axmed ayaa intaa ku daray in Talibaan aysan lahayn hogaamiyayaal ajnabi ah islamarkana u jeedadooda ay tahay mid siyaasadeed.
“Waxay leeyihiin(Taliban) arrin ku dhamaanaysa siyaasadda, marka nimankaas wax badan ayaa lagala xaaltami karaa, oo waa niman lala hadli karo, laakiin nimankan Al-Shabaab waxay u muuqdaan in aanay lahayn dano siyaasadda ku dhamaanaya ” ayuu yidhi
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2020/09/talibaan.jpg 160 324 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2020-09-13 19:32:162020-09-13 19:32:16Maxay Soomaaliya Ka Baran Kartaa Wadaxaajoodka Daalibaan iyo Dowladda Afqanistan?
Xogta Dahsoon Sadexda Tallaabo ee Turkigu kaga jawaabayo Gardaro kaga timaadda... Xogta Dahsoon Sababaha Turkigu u joojiyeen hawshii sahaminta shidaalka